आस्थाको स्वीकारोक्ति 'जीवनभर कुण्ठा बोक्न त सक्दिनँ नि,त्यसैले बोलेँ' - Dharahara Online
आस्थाको स्वीकारोक्ति ‘जीवनभर कुण्ठा बोक्न त सक्दिनँ नि,त्यसैले बोलेँ’
आस्था अहिले सामाजिक संजालमा चर्चामा छिन् गत बुधबार काठमाडौ एयरपोर्टमा भएको घटनाले उनलाई चर्चामा ल्याएको छ । प्रस्तुत छ यस बिषयमा उनकै शब्दमा उनकै भनाई ।
पेशाले म गायिका । गाउने मेरो कर्म । यहि सिलसिलामा सिक्किम कार्यक्रम जानेबेलामा भोगेको नमिठो पल यहॉ बताउन गईरहेको छु । म बचपन देखिनै हक्की स्वभाबको हुँ । नबिराउ न डराउ मेरो मुल मन्त्र नै हो । सहन सकिने कुरा त सहिन्छ तर हरेक कुराको एउटा हद हुन्छ । हद नागेपछि सहने कुरै आउदैन । प्रतिकार गर्न बाध्य भईन्छ । बुधवार दिउसो १२ बजे मेरो फ्लाईट थियो । निर्धारित समयमै म एअरपोर्ट पुगेकी थिए । बुद्ध एयरको जहाज डिले हुने भएपछि एयरपोर्ट परिशरमै कफि पिउदै समय व्यतीत गरिरहेकी थिए । त्यही बेला ‘मिस आस्था राउत’ भनेर बोलाइरहेको सुनेँ, म त २ बजे फ्लाइट भनेर ढुक्कले बसिरहेकी थिएँ, बुद्ध एअरका कर्मचारीले बोलाएको सुनेपछि म हतार–हतार चेकिङतिर लागें ।
हातमा कफि थियो । कफि छोडेर जान लागेकी थिए । मलाई बिंदा गर्न आएका आफन्तले लान पाईन्छ भने पछि लिएरै गए । चेकिंगमा रहेकी महिला प्रहरीले ज्याकेट खोल्न भन्नु भयो । मैले आफ्नो प्लेन छुट्न लागेको बताएँ, उहाँलाई ज्याकेट नखोले हुँदैन भनेर सोधेँ । आफूले राम्रोसँग सोधे पनि ती महिला प्रहरीले ‘ज्याकेट खोल्’ भन्दै रुखो व्यवहार गरिन । दुई दिनअघि पोखरा जाँदा त्यसरी ज्याकेट खोल्नु नपरेको तर हिजो जबरजस्ती ज्याकेट खोल्न लगाउँदा सहजै ज्याकेट खोले।
उहाँको व्यवहारले मलाई रिस उठिसकेको थियो, तैपनि मैले संयमता अपनाएकी थिएँ, अगाडि जान लागेकी थिएँ । तर उहाँले ठाडो भाषामा तेरो कफी लैजा भन्नुभयो, मैले पनि लान्न भनेँ । कफी लैजान्छस् कि तेरो ब्यागमा खन्याइदिऊँ?,’ ती महिला प्रहरीले ममाथी आक्रोश पोँखिन । मेरो ठाउँमा अरु कोही केटा भएको भए त्यहीँ घुमाएर कुट्थ्यो होला, त्यस्तो बिझाउने थियो उहाँको व्यवहार ।
माथिको अफिसरले तल्लो तहको प्रहरीलाई यस्तो व्यवहार गर्न सिकाउने त पक्कै होइन होला ! प्रहरीको तल्लो तहमा पनि ‘स्कूलिङ’ र नैतिक शिक्षाको जरुरी रहेको महसुस गरे। कार्यक्रमका सिलसिलामा कैयन् देशका विमानस्थलमा पुगेको छु। विदेशमा पनि प्रहरी हुन्छ यस्तो हर्कत कहल्यै भोगिन । तर नेपालका प्रहरीमा मात्र यस्तो दम्भ किन ?
केही पर चेकिङमा बसिरहेका प्रहरीलाई यो कस्तो शैली हो भनेर सोधेको र ती प्रहरीले मान्छे सबै एकनास नहुने प्रतिक्रिया दिए । त्यस्तो हुँदासम्म प्रहरीले हेरेरै बसे, शायद ती महिला प्रहरीले त्यही रवाफ अरुलाई पनि देखाउने गरेकी थिइन् कि ! एकजना दिदी सिलुगढी जान हिँड्नुभएको रहेछ, उहाँलाई त झन् पातलो खालको पोशाक पनि खोल्न भनिएछ, उहाँले पनि गुनासो पोख्दै मन नदुखाउन भन्नु भयो । प्रहरीका बारेमा नकारात्मक कुरा सुनिन्थ्यो, तर मैले हिजो जे भोगें, त्यसपछि मैले आफूले भोगेजस्तो सुनेर हुन्न रहेछ भन्ने बुझेँ । मैले जुन व्यवहार भोगें, त्यो साँच्चिकै दुःखद् थियो । प्रहरीले अपराधीलाई पनि नगर्ने व्यवहार आम नागरिकलाई गरेको महसुस भएको छ ।
साढे १२ बजे उड्ने भनिएको प्लेनलाई ट्राफिक जामका कारण ३ बजेसम्म काठमाडौं विमानस्थलमा कुर्नुपरेको थियो । भित्र छिरिसकेपछि रन वे मा समेत प्लेन रोकिएको थियो । भद्रपुर विमानस्थल पुग्दा ४ बजिसकेको थियो । यतिबेलासम्म पनि मेरो रिस मरेको थिएन । जिन्दगीमा पहिलोपटक त्यत्रो मान्छेको अगाडि त्यसरी दुर्व्यवहार सहनु परेपछि कसरी रिस मर्छ ?
म प्रशासन र प्रहरीलाई सधै सम्मान गर्ने तर केही प्रहरीले गर्दा सबै प्रहरीको छवि नै बिगारिरहेको देखेको छु । यस्तो अमानवीय व्यवहार भोग्न परेपछि म फ़ेसबुक लाईभमा आउन बाध्य भए । जे पर्ला पर्ला भनेर सत्य कुरा सबै बोलिदिए । मेरो शैली मिलेन होला बोली मिठो भएन होला तर कुरा त सत्य छ नि ! कति सहने हो यस्को पनि त एउटा सिमा हुन्छ नी ! जनताकै गासबाट तलब खाने राष्ट्र सेवकले जनताको सेवा गर्नु पर्दैन ?
फेसबुकमा मेरो आक्रोस देखेर सल्यानमा कार्यरत एक प्रहरी जवान भाइले मलाई सम्झाउने पारामा म्यासेज गर्नु भयो -‘संवाद अथवा वादविवाद एउटा सामान्य विषय हो । तपाईंलाई डिउटीमा रहेको दुर्व्यवहार मेरो लागि पनि स्वीकार्य छैन । कारवाही हुनुपर्छ । त्यसमा मेरो पनि जोडदार माग छ । तर तपाईंले बोलेका शब्दहरुले पनि तल्लो तहको मनोबल कमजोर गरेको छ । आस्था जी, प्युसो, डन्ठेजस्ता शब्द प्रयोग नगरी सम्मान गरेको भए राम्रो हुने थियो । सभ्य भाषामा भनेको भए राम्रो हुने थियो ।’
मलाई ति भाइको कुरा मनपर्यो । रिप्लाई गरे-‘मन नदुखाउनुहोला, रिसको आवेगमा भुल भएँ माफ पाऊँ, अरु जवान मुकदर्शक हुँदा, हिजो हद पार भयो । मेरो आक्रोश बढी भयो । त्यसैले क्षमा चाहन्छु । मेरो पनि सबै प्रहरी नराम्रो भन्ने सोच होइन, तर केहीको व्यहोरा नराम्रो भएको हो । फेरि पनि मन नदुखाउनुहोला, कहिलेकाहीँ यस्तै हुने रहेछ ।’
गलतलाई गलत नभने के गर्नु, यस्तो व्यवहार खेपेँ भनेर जीवनभर कुण्ठा बोकेर त म सक्दिनँ नि, त्यसैले बोलेँ। भिडियोमा प्रयोग गरेका केही शब्द प्रयोग नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने महसुस गरेर आमरुपमा माफी पनि मागे । नमिठो भोगे तर मलांई नराम्रो गर्ने ती महिलाको सधै उन्नति प्रगति होस् । तिनलाई भगवानले सदबुद्दि दिउन् जय होस् तिनको ।
मेरो कुराले आमसंचार माध्यम र जनमानसमा स्थान पाएछ । प्रहरी प्रशासनले पनि छानबिन गर्ने कुरो भएछ । बहुत राम्रो । गर्नुस छानबिन । सत्य तथ्य ल्याउनुस बाहिर । म सहयोग गर्न तयार छु । ग़लत गर्नेलाई गर्नुस कार्यवाहि ।जनताको सेवा गर्नु बसेका प्रहरीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सिकाउनुस् । ताकी मैले जस्तो अपमान कसैले भोग्नु नपरोस्